ktmkhabar.com - पानी कहिले पिउने, कति पिउने, कसरी पिउने ?
पानी कहिले पिउने, कति पिउने, कसरी पिउने ?
एजेन्सी/ पानी पिउने विषयमा हामीमा व्यक्ति पिच्छे आ–आफ्नै धारणा छ र त्यसलाई अनुसरण गर्दै आइरहेका पनि छौ । कोही खाली पेटमा पानी खानु ठिक भन्छन् भने कोही खाली पेटमा पानी खानै हुदैन भन्छन् । कोही खान खाएर लगत्तै पानी खानु खराब भन्छन् भने कोही ठिक । त्यसो भए पानी कतिबेला खाने, कसरी खाने र कति खाने भन्ने विषयमा धेरैलाई चासो छ । आज हामी पानि कुन बेला खाने भन्ने बिषयमा चर्चा गर्दैछौँ ।
बिहान उठेपछि दुई गिलास पानी पिउनुपर्छ । आयुर्वेदअनुसार खाली पेटमा पिएको पानीले शरीरलाई फाइदा गर्छ । यो पानीले शरीरभित्र रहेका विषाणुहरू बाहिर ल्याउन मद्दत गर्छ । यसरी पानी पिउँदा कब्जियतको समस्या पनि हटेर जान्छ । यस्तैं खाना खानु भन्दा करिब ३० मिनेटअघि र पछि मात्रै पानी पिउनुलाई पनि राम्रो मानिन्छ । यसले खानालाई पचाउन मद्दत गर्छ । खाना खाँदाखाँदै पानी खानु शरीरको लागि हानिकारक हो । यस्तो व्यवहारले शरीरलाई नोक्सानी पु¥याउँछ ।
कतिबेला पिएको पानीबाट के फाइदा
नुहाउनु भन्दा आधा घण्टाअघि पानी पिउँदा रक्तचापको समस्या हुँदैन । सुत्नु भन्दाअघि पानी पिउँदा हृदयघातको जोखिम कम हुन्छ । घरबाट बाहिर हिड्दा पानी पिएर निस्कनु राम्रो हुन्छ । साथै शारीरिक परिश्रमयुक्त काम गर्दा, शारीरिक अभ्यासपछि पानी पिउनु पर्छ । नत्र पसिनामार्फत शरीरको पानी गएर डिहाड्रेसन हुने जोखिम रहन्छ ।
उभिएर पानी नपिउने
आयुर्वेदका अनुसार पानी पिउदा कहिल्यै उभिनु हुँदैन । उभिएर पानी पिउँदा सिधै पेटको तल्लो भागमा पुग्ने गर्छ । जसका कारण पानीमा भएको पोषक तत्व शरीरले नलिइ बाहिरिने सम्भावना हुन्छ । पानी पिउँदा थोरै मात्रा र ढिलो गर्नुपर्छ । घट–घट पिउनु भन्दा सिप–सिप पानी पिउनुपर्छ । पानीको साथसाथै हाम्रो मुखमा भएको ¥याल, थुक पनि पेटमा पुग्छ । ढिलो गरी पानी पिएमा पाचन तन्त्र पनि बलियो हुन्छ ।
कस्तो पानी पिउने
आयुर्वेदका अनुसार पिउने पानी र शरीरको तापक्रम बराबर हुनुपर्छ । गर्मीको बेला फ्रिजको र जाडोको बेलामा धेरै तातो पानी पिउन् पनि शरीरको लागि हानीकारक हो ।
कसरी पिउनेपानी पिउने